Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inosvika kumagumo mumazuva mashoma ... | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inosvika kumagumo mumazuva mashoma ...
Kugoverwa kweGNU Linux Ubuntu 18.10 yakadomwa zita reCosmic Cuttlefish Ichasvika kumagumo ehupenyu mumazuva mashoma, kunyanya muna Chikunguru 18 chegore rino 2019. Canonical ichangozvizivisa uye zvinoreva kuti munhu wese ane ino sisitimu yekushandisa akaiswa achafanirwa kufunga nezveshanduro nyowani kana vachida kuenderera kugamuchira kuchengetedzeka uye zvigamba. Zvikasadaro ivo vanenge vari mune yakaoma mamiriro pasina iyi rutsigiro rwunopihwa nekambani yeBritish.
Icho chinhu chinonzwisisika, shanduro dzekare dzinogara dzichirega kuchengetedza kuti dzitsvage kune nyowani. Musi waGumiguru 18, 2018 Ubuntu 18.10 yakaburitswa uye kubvira ipapo takakwanisa kunakidzwa nayo. Zvino enda kuhupenyu hutsva. Iwe unogona kugadzirisa kune iyo nyowani Ubuntu 19 zviri nyore nekuraira kana kubva ku graphical Ubuntu yekuvandudza system. Zviite zvisinei iwe zvaunoda, asi kunamatira neshanduro iyoyo hakukurudzirwe kune pachena kuchengetedzeka kunetsekana.
Ubuntu 18.10 yanga isiri LTS vhezheni (Hongu hwaive Ubuntu 18.04, mune iyo kesi unogona kuzorora) sekuziva kwako, yaingova nerutsigiro kutenderera kwemwedzi mipfumbamwe, saka hazvishamise. Ini pachangu ndinogara ndichidzivirira mapfupi mahedheni shanduro uye ini ndinogara ndichiisa iyo LTS yekushandisa yakawanda nguva navo pasina aya marudzi ematambudziko Asi kune avo vanosarudza kugara vaine zvazvino maficha uye nhau. Yakazara, kana vachigona kugadzirisa pese pavanenge vachida ...
Ubuntu 18.10 yakaunza GNOME 3.30 (haisisiri iyo inozivikanwa Unity Shell iyo Canonical yakakosheswa) seyepasi desktop desktop, uye iyo Linux 4.18 kernel, zvitsva maficha, chitarisiko chitsva, kusangana kuri nani nharembozha, rutsigiro rweThunderbolt, uye zvimwe zvakawanda. Asi izvo zvaiita senge zvitsva mwedzi mishoma yapfuura yakatorwa neUbuntu 19. Kana iwe ukagadziridza kuUbuntu 19.04 Disco Dingo izvozvi, uchave nerutsigiro kusvika munaNdira 2020, haisi rutsigiro rurefu, asi rwakaringana kuti rudzivirirwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inosvika kumagumo mumazuva mashoma ...
Android File Transfer: yako "controller" pakati peAndroid neGNU / Linux